Iscasilaada Wasiirada Xisbiga Kulmiye maxay ka turjumaysaa?
Monday October 26, 2015 - 22:22:15 in Wararka by Super Admin
Warbixin:-(GNM)Tan iyo markii maanta ay ku dhawaaqeen 11 Wasiir inay baneeyeen xafiisyadii ay jooogeen Somaliland waxaa soo baxaya walaac ay muujinayaan taageerayaasha Xisbiga Kulmiye, taasoo dhabar jab ku noqotay tartankii ay kula jireen Xisbiytada
Warbixin:-(GNM)Tan iyo markii maanta ay ku dhawaaqeen 11 Wasiir inay baneeyeen xafiisyadii ay jooogeen Somaliland waxaa soo baxaya walaac ay muujinayaan taageerayaasha Xisbiga Kulmiye, taasoo dhabar jab ku noqotay tartankii ay kula jireen Xisbiytada kale ee Somaliland.
Wasiirada Iscasilay oo ka tirsan Xisbiga tala haya ayaa dareensan loolanka loogu jiro madaxa ugu sareeya xisbiga, waxaana jira xubno gacan saar la leh rag loo saadaalinayo inay ku soo baxaan xilkaasi.
Dadka taageersan Kulmiye ayaa u arka in Xisbigu uu banneeyay kaalintii uu kaga jiray awooda Axsaabta kale ee ka jira Soomalinad, waxayna magaalooyinka Somalinad laga dareemayaa hadal haynta wasiirada baneeyay boosaskii ay ka ka joogeen shaqada dawlada .
Xisbiyada Ucid, iyo Wadani, oo Kulmiye ay isku hayaan siyaasada ayaa guul u arka waxa Kulmiye dhexdiisa ka socda. maadaama uu jiro loolan adag oo dhanka siyaasada.
Dadka gorfeeya Siyaasada ayaa sheegaya inay tahay guul daradii ugu waynayd oo soo wajahada Xisbiga kulmiye, tan iyo makii kulmiye loo doortay awooda Somaliland.
Xafiiska Tafaftirka Hargaysa